Kuwana Mamwe Anofarira Ema Instagram Ads: 8 Yakanakisa Maitiro Ekutevera | Martech Zone
Kuwana Mamwe Anofarira Ema Instagram Ads: 8 Akanaka Maitiro Ekutevera
Muvhuro, October 21, 2019 Chitatu, October 14, 2020 Douglas Karr
Makwikwi ari kupisa pachikuva kunyangwe, uye marangi arikutsvaga kuti uwane zvakazara kubva kwavo Instagram kushambadzira. Imwe nzira mabhurani ari kushandisa kuyera kubatanidzwa, uye kukosha kwebrand kuri kuwana zvimwe zvinodiwa. Isu tichave tichitaura nezve marongero anogona kusimudzira huwandu hwezvaunoda iwe zvaunogona kuwana kune ako kushambadza pane yako brand account.
Tora zvimwe zvekuda zve Instagram ads
Likes dzakakosha mukubudirira kwechero mushandirapamwe pa Instagram. Iyo inoratidza kubatikana uye chinangwa kubva kune vashandisi, zvinoreva kuti urikufamba munzira kwayo. Izvo zvakati, zvinogona kuve zvakaoma kuti vanhu vafarire zvaunotumira, kunyanya kana iwe uri mucherechedzo urikungotanga. Isu takaratidza dzimwe nzira dzinogona kukubatsira iwe kuti uwane iyo yakanyanya kuwanda nhamba yezvinodiwa zvechiratidzo chako.
1. Goverana Zvemhando yepamusoro Mifananidzo uye Mavhidhiyo
Nzira yakanakisa yaunogona kuvimbisa zvaunoda paaccount yako ndipo paunotumira zvemhando yepamusoro zvemukati. Izvi zvinonyanya kuitika mune zveshambadziro nekuti ivo vanozoonekwa nevanhu vazhinji kwazvo kupfuura vateveri vako chete. Mazhinji maBrand anotora yakawanda yekuedza kuve nechokwadi chekuti kushambadza kwavo kunoshandura misoro yakawanda. Mushandirapamwe wakaitwa zvakanaka une mikana yakawanda yekuenda kuhutachiona, uchiisa chiratidzo muchiratidzo. Hechino muenzaniso wekushambadzira kwemhando yepamusoro pa Instagram
2. Gadzira Mashoko Akanaka Akanaka
Nepo chinonyanya kukwezva pa Instagram ndechekuti inokwezva yemifananidzo chikuva, zvinyorwa zvinouya sekondi yepedyo kana zvasvika kune zvigadzirwa zvinoratidza kwavo kugona. Mazano akanaka anowanikwa achiwedzera ruzivo rwemhando uye rubatsiro rwekurangarira chiratidzo. Zvakare, chinongedzo chinhu chechiposita chako icho chaunogona kudonha pachiri kuti uwane zvimwe zvekuda kana mufananidzo wacho usina kukwana. A chinokwezva chinyorwa inogona zvakare kuita kuti vateveri vataure, izvo zvinogona kuvandudza zvakanyanya kubatanidzwa.
3. Shandisa maCTA Uye Mahashtag Nenjere
Mahashtag nemaCTAs (kudaidzira kuita chiito) zvakanaka pakuita kuti vanhu vabate, chero iwe ukavashandisa nemazvo. Mahashtag chikamu chakakosha cheiyo Instagram kubatanidzwa zano. Kuti uwane kushambadzira kwako kune vanhu vari pedyo newe, shandisa ma hashtag emuno kushambadzira kwako kwe Instagram. Zvakare, iwe unogona tarisa ma hashtag anozivikanwa mu niche yako kuti uwane vamwe vateveri veakaundi yako.
MaCTA anoshandiswa kumanikidza vanhu kuti vaite chiito chakasimba paakaundi yako Instagram. MaCTA ane mamiriro, uye iwe unofanirwa kunzwisisa kuti unoishandisa kupi uye sei. Vanhu vanozongobvuma kune CTA kana paine chimwe chinhu chakakosha chauri kupa kwavari. Kugadzira pfungwa yekukurumidzira kana uchishandisa maCTA zano rakanaka. Mitsara yakaita tinya izvozvi kuti uwane zvimwe, inowanikwa chete kwenguva shoma mienzaniso yakanaka yekuita kuti vanhu vatsvage.
4. Tsvaga Zvakanyanya Kunaka Nguva dzekutumira
Chinhu chakakosha chekukwevera kwakawanda kubatanidzwa kuaccount yako kuve nechokwadi chekuti nguva yako yekushambadzira inoenderana neapo vateveri vako vachinyanya kushanda. Iko hakuna "nguva chaiyo yekutumira" pa Instagram - inosiyana nemhando dzebhizinesi uye tarisiro nzvimbo. Izvo zvakati, mutemo wakawanda wechigunwe kukwezva vatengi ndeyekutumira panguva maawa ekushanda panguva yezuva sekudya kwemasikati (11: 00 am to 1: 00 pmkana mushure mekushanda (7: 00 pm kuna 9: 00 pm). Izvo zvakati, iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve nzvimbo yauri kunongedza futi. Kune zvakare yakanyanya kutsanangurwa posvo maererano nenguva yekutumira pa Instagram kubva Hubspot kuti iwe unokwanisa kutarisa.
5. Kukurudzira kwepamuchinjikwa
Instagram inobatsira kuyambuka-chikuva kutumira, izvo zvinoita kuti ive yakanaka chikuva kune kusimudzira bhizinesi rako on. Iwe unogona kushandisa yako Instagram feed seyosi yekuvandudzwa pane mamwe mapuratifomu senge Facebook ne Twitter. Izvi zvinogona kunyanya kushanda mukuda kwako kana iwe uchiita makwikwi. Vanhu vanofarira kuhwina makwikwi, uye nekudaro kuwana iro izwi kune mamwe maforamu enhau mapuratifomu kunogona kukubatsira iwe kuti uwane kuwedzerwa kwakawanda kwechiratidzo chako. Zvakare, akawanda mar brand anoshandisa iyo URL mune yavo bio kubatanidza kune yavo Facebook peji kubva kwaunogona kuvatungamira ivo kune mamwe ma URL.
6. Kufanana Uye Kutaurira Pane Zvinoenderana NeNiches
Imwe nzira iwe yaunogona kuburitsa kufarira neakaenderana maakaundi mune imwechete niche ndipo paunotora nguva yekuita navo paaccount yavo. Instagram yagara ichishanda pane yakapusa mutemo - kubatanidzwa kwekuita. Saka kana iwe uchifambidzana neakaundi yavo, uri kuwedzera mikana yako yekudhirowa kubatanidzwa kubva kwavari futi. Iwe unogona zvakare kuwana vateveri vazhinji vanofarira account yako kubva ipapo, zvinoreva kuti zvimwe zvinodikanwa zveakaundi yako mukufamba kwenguva.
7. Joinha An Instagram Engagement Pod
Podhi iri yakananga meseji pakati peboka revanhu vari mune imwechete niche pa Instagram uye vanoda kukura vateveri vavo, zvavanoda, kana maonero. Pfungwa yekutanga yechero pod ndeyekuti pese panhengo yemapodhi inotumira zvinyorwa zvitsva, vanhu vari mupodhi vanotarisirwa kusangana nazvo. Izvi zvinobatsira iyo posvo kusvika pamusoro pevateveri vavo feeds. Vanhu vanga vachishandisa pods kubvira Instagram paakaita shanduko kune yavo algorithm. Iyo yekuvandudza inoratidzira mbiru zvinoenderana nemukurumbira kwete mukuverenga nguva.
8. Ita Kuti Ads Ako Ataridzike
Imwe yedzakasarudzika nzira dzekutora zvimwe zvekufarira kushambadziro yako ndeyekutarisa mhando yezvirimo. Unofanirwa kuona kuti kushambadza kwako kune mhando yakakwana kwavari, saka vanomira kubva pane zvimwe zvirimo. Izvi zvinosanganisira kushandisa yekugadzira uye yakajeka mifananidzo kutora pfungwa dzevateereri. Muenzaniso wekuti mabhurani anozviita sei izvi -
Starbucks yaive ne #FrappuccinoHappyHour mushandirapamwe wakaenda nehutachiona. Ivo vakapedza izvi nemavara akajeka uye nekugadzira kwekushandisa kumashure kuti vagadzire chimwe chinhu chakasarudzika icho chaidiwa nevateveri vavo.
Kuputira Kumusoro - Wese Munhu Anogona Kuwana Anofarira Pa Instagram
Kukurukurirana kwevateveri chikamu chikuru che Instagram pasina kupokana, uye Instagram maficha ndiyo nzira yakajairika vanhu vanoshandisa kurega mabrands azive iwo avanoda (hapana pun inotarisirwa!) Zvemukati. Mhando dzinoshandisa mari yakawandisa kushambadziro, uye dzimwe nguva havakwanise kuita kuti vashande.
Kunyangwe kuwana zvimwe zvekufarira kushambadza zvisina kuomarara, iwe unofanirwa kutarisa pane anopfuura mashoma maficha kuti uve nechokwadi chekuti chiwane chaicho. Zvinhu zvakaita sekutumira nguva, mhando yemifananidzo, uye zvinyorwa zvinoreva zvinhu zvekufunga kana iwe uchida kuti vateveri vako vapindure. Aya matipi anofanira kukupa iwe mamwe mazano nezvekuti uwane zvakadii kubva kune ako Instagram kushambadzira mishandirapamwe. Goverana mawaniro awakaita iwe kugadzirisa yako yekushambadzira zano kuti uwane zvirinani zvibodzwa.
Zvinhu Zvokuziva Kuti Utange NeKuteedzeresa Saved Vateereri paFacebook
Zvinotyisa… $ 8.8 Bhiriyoni Ichashandiswa paHalloween gore rino